China Surface Mounted Non-kọntaktị okpomọkụ nchọpụta Infrared Sensọ STPSMD38 emepụta na suppliers | Anwu
Elugogoro na-enweghị kọntaktị ọnọdụ okpomọkụ infrared Sensor STPSMD38
Igwe a na-agbanye n'elu (SMD) ụdị ihe mmetụta mmetụta okpomọkụ na-enweghị kọntaktị STPSM38 bụ ụdị ọhụrụ CMOS dakọtara thermopile IR sensor, na-egosipụta ezi uche, nrụpụta dị elu na ntụkwasị obi. Ihe mmetụta ahụ nwere kọmpat na nha ma dịkwa mfe ijikọta n'ihi ngwugwu seramiiki ya. A na-eji ihe mmetụta SMD38 eme ihe n'ọtụtụ ebe na ntinye nke nkenke nkenke dị elu, ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi na mmekọrịta mmadụ na igwe.
SMD38 bụ infrared dị anya, ihe mmetụta okpomọkụ na-abụghị kọntaktị bụ nke mepụtara ka ọ bụrụ nrụpụta dị elu. N'ime, a na-akpachara anya eletriki na ọkụ iji kwụọ ụgwọ ọnọdụ mpụga nke thermally siri ike. The thermopile N'ịchọpụta mmewere voltaji mgbaàmà na-adịkwu. Ike dị ukwuu nke SMD38 bụ na esemokwu okpomọkụ ndị a gburugburu ngwugwu ihe mmetụta ga-ebelata ka opekempe. Agbanyeghị, ụfọdụ ikpe dị oke ga-emetụta ihe mmetụta ahụ. Izi ezi nke temometa nwere ike imetụta ọnọdụ dị iche iche dị na ngwugwu na-ebute dị ka (n'etiti ndị ọzọ): elektrọnik na-ekpo ọkụ n'azụ ihe mmetụta ahụ, ndị na-ekpo ọkụ / ndị na-ekpo ọkụ n'azụ ma ọ bụ n'akụkụ ihe mmetụta ahụ ma ọ bụ ihe dị ọkụ / oyi dị ezigbo nso na ihe mmetụta ahụ ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ihe mmetụta dị na temometa kamakwa ngwugwu temometa.
Ọ na-ebe-eji: High nkenke na-abụghị kọntaktị okpomọkụ nha, Isi okpomọkụ mmesho, Non-kọntaktị temometa maka mobile na IoT ngwa, okpomọkụ N'ịchọpụta mmewere maka obibi, azụmahịa na ulo oru ụlọ ntụ oyi, Industrial okpomọkụ akara nke na-akpụ akpụ akụkụ, Home ngwa na njikwa okpomọkụ na nlekọta ahụike, Nlekọta anụ ụlọ.
Elu ugwu seramiiki ụlọ
Thermistor okpomọkụ akwụkwọ gụnyere
General nzube thermometry
Nke gara aga: Kpọtụrụ onye na-enweghị okpomọkụ na-atụ temometa ya na ihe mmetụta IR STP11DF89
Osote: Digital okpomọkụ N'ihe Contactless Infrared mmetụta STP9CDITY-300
Contactless okpomọkụ nchọpụta Thermopile Iye ...
Infrared temometa maka contactless okpomọkụ ...
Industrial Non-kpọtụrụ Pyrometry thermopile Inf ...